Mareykanka: Al-Shabaab 20% ayay maamulaan dhulka Soomaaliya | HalQaran.com
Home Wararka Maanta Mareykanka: Al-Shabaab 20% ayay maamulaan dhulka Soomaaliya
Mareykanka: Al-Shabaab 20% ayay maamulaan dhulka Soomaaliya
Washington (Halqaran.com) – Dowladda Mareykanka ayaa sheegtay in maleeshiyaadka Al-Shabaab ay 20% ka maamulaan dhulka Soomaaliya.
Agaasimaha Xiriirka dadweynaha Taliska Mareykanka ee Afrika Chris Karns, oo wareysi siiyay Idaacadda Codka Mareykanka ee VOA,waxa uu sheegay in Al-shabaab ay hoos u dhigeen weeraradda ay ka geysteen gudaha Soomaaliya.
Waxa uu sheegay in Al-shabaab sanado ka hor ay maamuli jireen 95% ilaa 80% balse ay haatan maamulaan 20%,taasina ay sabab u tahay weeraradda Ciidamadda Dowladda Federaalka Soomaaliya iyo AMISOM ay qaadaan.
Dhanka kale waxa uu sheegay in Mareykanka uu xoogga saaro tababarka Ciidamadda Soomaaliya gaar ahaan Kumaandoosta loo yaqaanno DANAB oo uu sheegay in ay yihiin Ciidan awooda in ay la dagaalamaan Al-shabaab.
Dowladda Mareykanka ayaa Tababaro siisa Ciiidamadda Kumaandoosta ee loo yaqaanno DANAB,kuwaasi oo howlgalo ka fuliya Gobolka Shabeelaha Hoose oo Shabaab ay ku xoogan yihiin.
Waxay aheyd, dhammaadkii bishii aynu soo dhaafnay, markii maleeshiyada Al-shabaab weerar ku qaadeen saldhigga Balli Doogle ee Gobolka Shabeellaha hoose halkaas oo uu Mareykanka saldhig ku leeyahay,waxayna sheegeen in ay dileen 12-askari.
Ciiidamadda Kumaandoosta ee DANAB
Taliska Mareykanka ee Afrika Chris Karn